विवाह भएको ३ महिना नवित्दै किन नारायणीमा हाम्फालिन् कविताले ? रहस्य यस्तो छ । (भिडियो सहित) - Complete Nepali News Portal
विवाह भएको ३ महिना नवित्दै किन नारायणीमा हाम्फालिन् कविताले ? रहस्य यस्तो छ । (भिडियो सहित)
Mahesh Bohara June 16, 2019
प्रेम सुनार,बुटवल– शुक्रवार साँझ दाजुसँगै चढेको स्कुटीबाट ओर्लिनासाथ नारायणघाटको पुलबाट हाम्फालेर नारायणी नदिमा बेपत्ता भएकी चितवन घर भएकी २१ वर्षीया कविता सापकोटाले हाम्फाल्नुको कारण रहश्यमय बनेको छ । उनको माइती घर कन्चनपुरको महेन्द्रनगर नगरपालिका– १८ खरकट्टी हो । कविताको विवाह गत फागुन–१७ गते चितवनको राप्ती नगरपालिका–६, वीरेन्द्रनगरका २९ वर्षीय पवन सापकोटासँग भएको थियो ।
उनले श्रीमतीको तस्विर आफुसँग नभएको र उनी फोनमा कम बोल्ने गरेको बताए । सापकोटा परिवार म्याग्दीबाट चितवन बसाईसराई गरेका थिए । ईलाका प्रहरी कार्यालय गौडाकोटका प्रहरी सहायक नायव निरीक्षक ९सई० यज्ञ पौड्यालले बेपत्ता कविता सापकोटाको खोजी कार्य भई रहे पनि फेला पार्न नसकिएको बताए । ‘हाम्रो एरियासम्म खोजी गरियो, उनको परिवारका दुबै पक्षले पनि खोज्दै जाने क्रममा निकुञ्जमा रोकिएका छन् । अहिले भर्खर दुबै पक्ष आउनुभएको छ र त्रिवेणीतर्फ उहाँहरु जानका लागि पत्र बनाई दिन लागेकाछौ’ सई पौड्यालले भने ।
निखील उप्रेती को कडा चेतावनी मोदी लाई, सीमाबारे बोल्दै दरिलो...
एमसीसी चोर बाटोबाट पास गर्न खोजिँदैछ : भीम रावल
भारतलाई धक्का ! लिपुलेक समेटेर नक्सा बन्ने !! बल्ल नेपाली...
भारतसँग भएको यि ५ घातक तथा प्रभावशाली हतियार, जुन देखि...
झापामा पत्याउनै नसकिने ३ बर्षे दुधे बालगायक भेटिए!,यस्तो जादुमयी स्वर,८...